Voaray ny adiresinao fa miezaka ny mandefa an’ilay logiciel a zao. Maiarahaba anao amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Manao ahoana toa tsy mande ilay lien ahafahana mahazo ilay logiciel? Mirary soa dia mazotoa. Afaka mba mahazo ve ampiasaina aty an-trano sy aty am-piangonana.
Raha mba misy olona afaka manampy ahy dia isaorako mialoha. Tena sambatra, misaotra an’ mpanambotra de misaotra an’ Jesosy Kristy Tompo, ho Azy irery anie ny voninahitra, maranata. Manahona Tompokoba maniry izay ba ho afaka ampiasaina amin’ny macbook ihany koa ny baiboly malagasy Répondre. Salama tompoko, ahoana kay no mba hahazoana ilay Baiboly version complète? Averiko eto indray ilay izy: Télécharger Ny Baiboliko 3. Gratiitement mikatona mihintsy izy io rabefa:
Ny Tompo anie homba anao hatrany amin’izay kasainao atao rehetra! Misy ny rehetra rehetra baiboly, fihirana, sns fa ilay izy ampiasaina ordinateur malabasy no ilàna ity Baiboliko 3.
Misaotra mialoha Tompoko amin’izany version mobile izany. Misaotra betsaka fa azoko ihany ilay application ny farany. Il vous permet aussi de faire des recherches par verset ou par mots clés.
Samy hotahian’i Jesosy daholo indrindra fa ianao izay nanao ity logiciel ity. Tsy mandeha intsoiny ilay lmioen anareo ao amin’ny OneDrive: Voaray ny adiresinao fa miezaka ny mandefa an’ilay logiciel a zao. Averiko eto indray ilay izy:. Miarahaba tompoko, ndrao misy manana solfa fihirana fanampiny kay malgasy ato azafady, ito ny gratuitwment email-ko herjessramamonjisoa gmail. Mikasika ny sosokevitra indray, azonao atao ny manoratra aty amiko mivantana ahafahantsika miresaka misimisy kokoa agape1.
Tena sambatra, misaotra an’ mpanambotra tratuitement misaotra an’ Jesosy Kristy Tompo, ho Azy irery anie ny voninahitra, maranata Répondre. Mahereza amin’ny asan’ny Tompo. Ny olana anefa dia izao: Par gasysoft dans Accueil le 5 Avril à Tsara be sy manampy o Misaotra Répondre. Betsaka ny olona no manoratra sy miantso, mangataka ny mba hamoahana ny version mobile ny Ny Baiboliko.
Par un malavasy clic, vous pouvez poster directement sur votre mur facebook vos versets préférés. Tena sambatra, misaotra an’ mpanambotra de misaotra an’ Jesosy Kristy Tompo, ho Azy irery anie ny voninahitra, maranata. Afaka mba mahazo ve ampiasaina aty an-trano sy aty am-piangonana.
Ny fihirana mbola tsy nisy fa vao eo am-panamboarana mihitsy. Tokony mbola mandeha ireo rohy fangalana ilay Baiboly. Sady mandeha amin’ny SE rehetra. RAha sendra tsy lasasatria mavesatra dia ity ny lien mora bajboly mitéléchérger azy sady malaky be.
Toa tsy mety mandeh mantsy le izy. Raha mba mety tompoko dia mba alefa ty adresse ty doinfographist gmail.
Bjr, za zany miasa amin’ny orin’asa iray e! Mankahery anao hatranihatrany fa asa masina izao ataonao izao fa mizara ny tenin’Andriamanitra ho an’ny olona rehera!
Mahefa be asan’ny Tompo. Manao ahoana toa tsy mande ilay lien ahafahana mahazo ilay logiciel? Ity Misy lien azo hi-télécharger – na azy raha mety aminao.
Tsy mikatona mihintsy izy io rabefa: Maintenant, vous pouvez consulter la bible en 3 langues différentes, en maalgasy, en français ou en anglais. Mba alefaso mail cyraique. Ity ny adresse mail:
Previous TÉLÉCHARGER AICHA REDOUANE GRATUIT